"स्थानीय उपस्थिति" धोका "को लागी गिरावट छैन Martech Zone
शुक्रबार, मे 2, 2014 शुक्रबार, जुन 6, 2014 Douglas Karr
मेरो फोन दिनभरि बज्यो। प्रायजसो समय म ग्राहकहरूसँग भेट्छु तर अरू समयमा यो मेरो डेस्कमा खुला बसेर काम गरिरहेको बेला। जब फोन बज्दछ, मँ हेर्छु र प्रायः 317१4,000 एरिया कोड डायल भैरहेको हुन्छ। यद्यपि नम्बर मेरो सम्पर्कमा छैन त्यसैले मैले थाहा पाइन कि वास्तवमा को हो मलाई बोलाउँदैछ। मेरो फोनमा ,XNUMX००० भन्दा बढि सम्पर्कहरूसँग - सिnch्क्रोनाइज गरिएको LinkedIn र एभरकन्ट्याक्ट... म धेरै मलाई बोलाउने सबैलाई पहिचान गर्दछ।
तर यो फरक छ। यो एक आउटबाउन्ड बिक्री कम्पनी हो जसले 317१XNUMX लाई स्पूफ गर्दैछ क्षेत्र नम्बर प्रयास गर्नुहोस् र सुधार गर्न को लागी म फोन उठाउँछु। बिल जोनसनसँग कुरा गर्दा - हाम्रो ग्राहक, आउटबाउन्ड बिक्रीमा विशेषज्ञ, र संस्थापक बिक्री, यो रूपमा चिनिन्छ स्थानीय उपस्थिति र यो आउटबाउन्ड कलिंग टेक्नोलोजीको सबैभन्दा नयाँ रामबाण औषधि हो।
यहाँबाट एक उदाहरण छ RingDNA:
स्थानीय उपस्थितिको साथ समस्या यो छ कि यो तुरुन्तै एक बिक्रेता र बेइमान संलग्नताको साथ एक सम्भावना बीच हात मिलाउने सुरू गर्दछ। यस दिन र उमेरमा, जहाँ उपभोक्ताहरूले कम्पनीहरूबाट बढी पारदर्शिता र इमानदारीको माग गरिरहेका छन्, यो सीधा द्वन्द्वमा छ।
स्थानीय उपस्थिति उद्योगमा प्रचलित र बढ्दो छ ... र यो मेरो विचारमा भ्रामक र मूर्ख पनि हो। म RingDNA मा कुट्न कोशिश गरिरहेको छैन - तिनीहरू सयौं विक्रेताहरु हुन् यो समाधान बेच्नेहरू मध्ये एक हो र मैले युट्यूबमा भिडियो फेला पारेको पहिलो हो। तर जब RingDNA भिडियो ले फोन कलको नम्बरलाई जवाफ दिए वा फर्काईयो भनेर बताउँदछ, यसले यो भ्रामक रणनीति प्रयोग गरेर तपाईंको बिक्रीलाई गरेको क्षतिको अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दैन।
डग हन्सेन, सिनियर प्रबन्धकको खाता विकास को पालो, अन्जानमै एक विक्रेता को लागी एक कल उठायो जसले पहिले तिनीहरुलाई छुनु भयो स्थानीय डायल क्षमताहरू। तत्काल उसले विक्रेताको ईमान्दारीको बारेमा कम सोच्यो यद्यपि उनलाई थाहा थियो कि उनीहरू के गरिरहेछन्।
मसँग sales० बर्ष भन्दा बढी बिक्रीको अनुभव छ, टेलिफोनमा पूर्वेक्षण सहित र सम्भवतः धेरै जसो रिटर्नी कलहरू वा पिक-अपहरू कसैको रूपमा प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग गरेको छु। जबकि म को आकर्षण बुझ्न स्थानीय संख्या एक सम्भावितको कलर आईडीमा देखा पर्न, मैले फेला पारे कि प्राय जसो तीतो गर्ने सम्भावनालाई उनीहरूले बहकाउँदछन् ती लिन्छन् र नकारात्मकताको अवरोध सिर्जना गर्दछन् जसको शुरुआतमा उल्लंघन गर्न आवश्यक पर्दछ। जबकि यी प्रविधिहरू संभावनामा छिटो प्राप्त गर्न प्रभावकारी छन् जबकि ती पनि प्रसारण गर्दछन् कि हामी हाम्रो दृष्टिकोणमा कम पारदर्शी र स्पष्ट छौं र एक भरोसा सम्बन्धको मार्ग लाई कमजोर पार्छ।
डगले यो ठीकसँग भने। जे होस् प्रतिक्रियाको दर बढ्यो जब तपाई उही क्षेत्र कोडको साथ डायल गर्दै हुनुहुन्छ भने, म कल्पना गर्न सक्दिन कि तपाई रूपान्तरण दर यसको साथ बढिरहेको छ। म यो पनि विश्वास गर्न सक्दिन कि तपाईं धोकादायक खुट्टामा शुरू गरेर सम्पूर्ण बिक्री चक्र जोखिममा राख्नुहुन्न।
विश्वास र प्रामाणिकता हरेक बिक्री को कुञ्जी हो। एरिया कोडहरू स्पूफ गरेर उनीहरूलाई जोखिममा नपर्नुहोस्!
टैग: क्षेत्र नम्बरकल गर्दैस्थानीय उपस्थितिआउटबाउन्ड बिक्रीबिक्री सक्षमताटेलिफोनी
CoPromote: प्रकाशकहरूको लागि एक सामाजिक पदोन्नति प्लेटफार्म
मई 5, 2014 मा 9: 11 एएम
हो, यो ती चालहरू मध्ये एक हो जुन यसको समयावधि समाप्ति मिति अघिको हो। १ months महिना अघि यसले मलाई पहिलो दुई कपमा मूर्ख बनायो, अब कलर आईडीमा हिर्काउने कुनै पनि कुरालाई वेवास्ता गरिनेछ।
अगस्ट 3, 2015 मा 12: 30 AM
जबकि यो पूर्वनिर्धारित रूपमा भ्रामक रूपमा देख्न सकिन्छ, यो बढेको उत्तर रूपान्तरण दर बेवास्ता गर्न गाह्रो छ र यो को उपयोग गर्न को लागी अत्यधिक लागू हुन्छ परिस्थितिहरूमा जब ए ग्राहकले एक कल वा बी अनुरोध गरेको छ। अन्त प्रयोगकर्ता उपभोक्ता हो। अब, यदि तपाईं सी सुइट वा उद्यम खातामा बेच्दै हुनुहुन्छ भने, स्थानीय उपस्थिति प्रयोग नगर्नुहोस्। तर विश्वासको सर्तमा मैले यो उपकरणलाई पहिलेको स्थितिमा प्रयोग गरेको थिएँ (त्यस समयमा उपभोक्ताहरूलाई बेच्ने) र विश्वास कहिल्यै हराएन। यो जहिले पनि हुर्काइन्थ्यो - "के तिमी केहि स्थानीय" हौ जसमा म उनीहरुलाई मेरो सहज फोन प्रणालीको बारेमा बताउने थिएँ र त्यो वाक्यांश "अन्धा चतुर ठीक?" हामी दुबै चकचत गर्छौं र बिक्री कल जारी राख्दछौं। यस बीच, उत्तर दर त्यो विशेष अनुप्रयोगमा %००% भन्दा बढ्यो। व्यापार बन्द गर्न 400x अवसरहरू। म ती दिनहरु कुनै पनि दिन लिन्छु।
अगस्ट 3, 2015 मा 10: 54 AM
त्यहाँ धेरै भ्रामक मार्केटिंग रणनीतिहरू छन् जुन प्रत्येक माध्यममा रायनमा प्रतिक्रिया र रूपान्तरण दर सुधार गर्दछ। तपाईं अनमोलता लिनुहोस्, म प्रशंसक होइन र राम्रो कम्पनीहरूलाई विश्वास गर्दैनन् उत्कृष्ट उत्पादनहरू र सेवाहरूको राम्रो चीजहरू यस तरीकाले गर्न आवश्यक छ।
के यसलाई २०० of को कलर आईडी ऐनमा सत्यको उल्लंघन मानिनेछैन?
म वकील होईन, तर मलाई विश्वास छैन कि कलरको वास्तविक स्थानसँग मेल खाने एरिया कोड बाध्य पार्ने कुनै कानुनी आवश्यकता छ। तपाईंको आफ्नै मोबाइल उपकरणको बारेमा सोच्नुहोस् ... म लस भेगासमा हुन सक्छु र कसैलाई कल गर्न सक्छु र “317१XNUMX” अझै पनि रेजिस्टर हुनेछ।